Mayelana NATHI | Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd.
IShandong Limeng Pharmaceutical Company yasungulwa ngonyaka we-1993, manje isinomuthi wesimanje wendabuko wamaShayina, ukudla okunakekelwa kwezempilo, indawo yokusebenzela yezimonyo, izinsiza kusebenza zezokwelapha kanye nezinsimbi zomhlangano, indawo yokuhlanzela izimpahla yokusebenzela kanye nomhlangano wendabuko wokukhishwa kwemithi yamaShayina, futhi zonke zidlulile isitifiketi somhlangano wokuhlanzwa esiyizinkulungwane eziyikhulu. Le nkampani ibilokhu ihambisana nomqondo wokuthuthuka wobuchwepheshe obuphezulu, kanye nokubambisana embonini-eyunivesithi nocwaningo. Ineqembu elilodwa lobuchwepheshe be-R & D, umgogodla wezobuchwepheshe kanye nochwepheshe. Le nkampani izama ukuthuthukisa isu lomkhiqizo, futhi igama elithi "Limeng" laklonyeliswa njengoMasipala Wokuhweba Owaziwayo waseJinan ngo-2012.
Njengamanje inkampani inezinsiza kusebenza zezokwelapha nezinsimbi zomhlangano ezingaphezu kwamamitha-skwele angama-2,000, indawo yokusebenzela ejwayelekile yokunakekelwa kwempilo yamamitha ayisikwele ayi-10,000, namafomu esikali afaka amaphilisi, ithebhulethi, ama-granules kanye ne-powder njll. Ukuze wandise umthamo wokukhiqiza yenkampani, yenza ngcono izinhlobo nokwakheka kwemikhiqizo, inkampani yethu ikhulise isisekelo esikhulu sokukhiqiza esingaphezu kwamamitha-skwele angama-30,000, izinhlobo zokukhiqiza zimboza inqwaba yezigaba isb. umuthi wendabuko wamaShayina nokucubungula okujulile, amaswidi, ukudla okusheshayo, itiye elingena esikhundleni, imikhiqizo yobisi, isisombululo somlomo, i-emplastrum, izimonyo, ukudla okusebenzayo nokudla okungcebeleka njll.
Izinsiza kusebenza ze-Hardware zeLimeng Pharmaceutical
Le nkampani inezindawo zokusebenzela ezinhlanu ezijwayelekile njengamanje, lapho indawo yokusebenzela yokudla okunakekelwa ngezempilo ingamamitha-skwele ayizi-2 000, indawo yokusebenzela yezimonyo ingamamitha-skwele angama-2 000 kanye nomhlangano wokukhiqiza we-QS ingamamitha-skwele angama-3,000, amathuluzi wezokwelapha kanye nezinsimbi ezibhekene nomaski wokuhlangana kungamamitha-skwele angama-200, ukubulala amagciwane kanti inzalo yomkhiqizo wokusebenzela inzalo ingamamitha-skwele ayi-1 000. Isigaba senhlanzeko somhlangano wokusebenzela sonke singafinyelela izinkulungwane eziyikhulu, futhi bonke badlulile isitifiketi seShandong Provincial Food and Drug Administration.
Njengamanje i-apharathasi yezokwelapha nezinsimbi zomculo zinemigqa emihlanu yokukhiqiza imaski egcwele othomathikhi enamandla okukhiqiza nsuku zonke efinyelela ku-400,000. Isifihla-buso sobuso esilahlwayo nesifihla-buso sezokwelapha esilahlwayo konke kudlulisile ukutholwa.
Indawo yokusebenzela yokunakekelwa kwezempilo inamaphilisi aphezulu, ithebhulethi, igranule, izintambo zokukhiqiza itiye ezelaphayo, kanye nolayini bokupakisha abazenzekelayo, abangaveza izigaba ezingaba ngu-50 zamafomu omthamo amane. Le nkampani inezisetshenziswa ezingaphezu kwezingama-70 zemishini yokukhipha futhi imigqa engaphezu kwengu-20 yokukhiqiza ama-capsule enomthamo wokukhiqiza waminyaka yonke ingu-1 billion; Inezintambo ezinhlanu zokukhiqiza amathebulethi ezinamandla okukhiqiza minyaka yonke yizigidi ezingama-200; Ngokulandelana inezintambo zokukhiqiza ze-granule eziyi-10 nolayini bokukhiqiza itiye abali-10 abanamandla okukhiqiza wonyaka ngamathani angama-300.
Kunamasethi amaningana wemishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme engakhiqiza iyunithi ejwayelekile ye-liquid kanye nokhilimu & i-lotion ku-workshop yezimonyo, futhi imikhiqizo ifaka i-sanitizer yesandla, i-gel yokuhlanza umzimba, namaski obuso njll. Imikhiqizo eshisayo.
Ilandelana ngokulandelana inendawo yokusebenzela eyodwa yeziphuzo kanye ne-1 candy QS isitifiketi workshop. Ngokwethula okokusebenza okuzenzakalelayo okuthuthukile okuzenzakalelayo ekhaya nakwamanye amazwe, amafomu esikali afakiwe afaka isiphuzo esiqinile, i-gel candy, i-tablet candy njll.
Le nkampani inabasebenzi abangaphezu kwama-200 njengamanje, lapho kukhona khona abasebenzi abangama-30 bokuphatha, abasebenzi bokucwaninga besayensi abangama-30, abasebenzi bokuthengisa abangama-50 nabasebenzi abangaphezu kuka-150 bokukhiqiza. Bonke abaphathi nabacwaningi besayensi baneziqu zasekolishi noma ngaphezulu, lapho abantu abayi-13 baneziqu eziphezulu zobungcweti kanti abantu abangama-25 baneziqu zobungcweti obuphakathi nendawo; abasebenzi bezokukhiqiza yibo bonke abafundi abaphothule emakolishi ezokwelapha nakwezemithi eSifundazweni SaseShandong, futhi baqala umsebenzi ngokuqeqeshwa okufanelekile.
Le nkampani igqugquzela umqondo wokuphathwa kwamabhizinisi othi "Survive on Quality, Develop on Credit, Oriented with Technology, Profits on Management". Isebenzisa ngokuqinile imithetho efanele kanye nemithethonqubo yezomthetho ukwenza ukukhiqizwa nokuphathwa, yethula imodi yokuphatha esezingeni eliphakeme yokuhlanganisa ubuchwepheshe, ukukhiqiza, imakethe ebhizinisini, futhi izuze imiphumela ebalulekile, ebeka isisekelo esiqinile sebhizinisi lokuthuthuka uye kwelinye izinga elisha bese udala ikhulu eliqhakazile.